China siko breathable 100% ipholiyesta ukufuma wicking amadoda t shirt mveliso kunye nabenzi | Umbono
isiko yunifomu yesikolo iqhosha leqhosha lesiko em ...
Ihowuliseyili siko zokwazisa cheap isebenza 100% poly ...
siko abafazi-tri-mxube 50% ipholiyesta 25% ikotto ...
Custom screen yoshicilelo plain akukho brand amadoda ethambileyo ro esisiseko ...
isiko elinokuphefumla i-100% ipholiyesta yokufuma okugoqa amadoda ihempe
Le t-shirt yenziwe nge-100% ye-polyester cationic, enomsebenzi okhawulezayo omileyo. Ilungile kulo naliphi na iqela lezemidlalo elifuna ukubonakala kwisihlwele kunye nentsingiselo yentsingiselo!
100% ukufuma ipholiyesta cationic ukufuma
Ilaphu elinokuphefumla lehempe yomdlalo ayisindi ngoko ke ayizukukunika ubunzima kubushushu kunye nokufuma. Iza ngaphezu kwemibala engama-30 ukuze ufumane efanelekileyo kwiqela lakho, nokuba umdlalo wakho uyibhasikithi yebhasikithi okanye i-croquet. Kwaye siyifumanela abantwana, ulutsha, kunye nabantu abadala, kunye nobukhulu obukhulu bunokwenziwa ngokwezifiso.
Egqithileyo isiko iiyunifom yesikolo iqhosha lomqhaphu isiko lokuhombisa pique polo ihempe logo
Okulandelayo: Iposi elandelayo
Amadoda T Shirt Cotton
Ihempe yamadoda e-Oem
T Shirt yamadoda
I-T-Shirt ethengisa amadoda amaninzi